Man Down System / Lone Worker Kudzivirira Solution (Singapore) | Man Down System / Lone Worker Safety Solution Murume Kudzochengetedza Zvigadzirwa - Iva nechokwadi kuti iwe unonyeverwa kana mushandi ane chirwere
Spy Hakavanda Inzwi Rekodha
iHelp shanduro 2 - Man Down System - Yese Yese Mushandi Yevashandi Yekuchengetedza Solution
Slips, kufamba uye kuwira zvinoramba chiri chikonzero chinonyanya kukonzera njodzi dzebasa mumakambani mazhinji. Kunyangwe uchidonha kubva kumusoro kana kutasva wiring uye nedzimwe njodzi, kuwira kunogona kukuvadza zvakakomba uye kunyange kupisa kune vashandi vako. Kuziva kana kuwa kuchiitika uye kutumira rubatsiro rwechipatara nokukurumidza kunogona kuva musiyano pakati pekukuvadzwa kwechidiki uye kuchinja hupenyu. Asi zvakadini kana vashandi vako vachishanda vari voga kana kuti vasingaoneki uye vakanzwika? Vanogona sei kusimudza alamu kana vakakuvara? Murume ari pasi ma-alarms uye zvigadziri ari kuve mhinduro yekuwedzera yezviitiko zvakadaro.
iHelp 2.0 Mushandirwi weGPS Tracker Chigadzirwa inogona chaizvo-yakakodzera panguva yakatarisa nzvimbo yevashandi, kana pane kuwira, iHelp 2.0 zvinogona kuita kuti munhu akangwarire kune foni yemumwe munhu, kuitira kuti rubatsiro runogona kupiwa pakarepo.
Mushandi anogona kudana kana kutumira nyevero uye zviziviso kana zviitiko zvinokurumidzira kumutariri pakarepo.
Kune vashandi vari kushanda munzvimbo dzakaoma zvikuru dzakadai sekuvaka, zviwanikwa, hutano, kushandiswa kana kutfambisa, Aware 360 inopa vashandi vakakwana kuchengetedza zvigadziriswe kuvimbisa kuti vashandi vanogona kugamuchira rubatsiro kana rubatsiro rwemishonga kana zvichidiwa zvikuru. Kushandisa satellite (GPS) zvigadzirwa, smartphone apps uye wearables tinoita kuti teknolojia yakarurama inoshandiswa pane imwe neimwe yakasiyana.
- Vashandi veLone
-Vashandi muNzvimbo dzine Njodzi
- Kure Kwevashandi
Kudonha Kuona & Kwekufambisa Kutarisa
8. Ne rechargeable 900 mah Lithium battery. Nguva yakamira: 10 mazuva.
Kukurukurirana: Yakabudiswa TCP / IP pamusoro peGPRS klasi 10, SMS, SMS
Antenna: Yakagadzirwa muFPC antenna
GPS chipset :Blox 0702 (AGPS Support)
Mutevedzeri nguva zhinji: 1575.42 MHz
Cold inotanga: approx 32S, yakafanana TTFF (95%)
Kuvamba kwemafunguro: kusvika 32S, yakafanana TTFF (95%)
Kutanga kutanga: kusvika: 1S, yakafanana TTFF (95%)
Antenna: Yakavakwa mumakiramic antenna
Bhatiri yekuchengetedza: Rechargeable, 3.7V, 800mAh (Li-Poly)
Kurema (NET): 30g
iHelp Man Down System - Yayo Yese Worker Safety Solution Yevatengi Rondedzero
14541 Total Views 80 Views Nhasi
murume pasi kuchengeteka
OMG Solutions - Yakatenderwa Singapore 500 Enterprise 2018 / 2019
Ndeupi munhu ari pasi pemahara?
Murume ari pasi maapurogiramu maitiro anowona anowa uye anotumira murume pasi kurinda kune imwe kunze kwekucherechedza. Kune huwandu hwevanhu pasi pasi dzeanarudzo dzinogona kuwanika pamusika nhasi, kubva pazvifambiso zvemafoni kusvika kune unyanzvi hwekombiyuta. Murume ari pasi maaramu ndiwo mhinduro yakakosha kune avo vanoshanda mumamiriro ezvinhu apo mashizha, kufamba uye kuwira kune ngozi, avo vanotambura nenyaya dzezvehutano uye avo vari pangozi yekurwisa muviri. Murume ari pasi-avhaya inonyanya kukosha kune vashandi voga vanogona kunge vasingakwanisi kuchenjerera mumwe munhu kana vachitambura vachigumburwa uye vanogumburwa vasina chavanoziva kana vasingakwanisi kuita foni.
Lone mushandi kuchengetedzeka: Nguva yekuwana yakakomba
Mushandi ari wega mushandi anoita basa rinoitwa rakazvimiririra kubva kune vamwe vashandi pasina padyo kana kutariswa zvakananga. Vashandi vakadaro vanogona kuve vakaiswa mungozi nekuda kwekuti hapana wekuvabatsira. Kuva wega zvakasarudzika kunoisa munhu pachinzvimbo uye nzvimbo apo iwe unogona kungozvishingisa pachezvako, mune zvengozi kana tsaona zvinowanzo kuve nengozi sezvo uri wega uye kuzvitarisira.
Copyright 2011, OMG Solutions Pte Ltd Yakagadziridzwa	OMG Solutions Pte Ltd